अमेरिका बिरुद्ध उत्तेजनापूर्ण नारा लगाउनेहरु अमेरिका आउन अपहत्ते किन गर्छन ? - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 12:03
अमेरिका बिरुद्ध उत्तेजनापूर्ण नारा लगाउनेहरु अमेरिका आउन अपहत्ते किन गर्छन ?
विश्वका कैयौ देशका नेतृत्ववर्ग अमेरिका बिरोधि छन्
विजय थापा २०७५ माघ १६ गते १:३३ मा प्रकाशित
सपनाको देश अमेरिका । अवसरको भूमि अमेरिका । विश्वका सबै मानिस अमेरिका आउन र अमेरिका देश मन पराउदैनन । तर अधिकांश अमेरिका आउन चाहन्छन । यसो भन्दैमा अमेरिका आउदिन भन्ने हैन । विश्वका कैयौ देशका नेतृत्ववर्ग अमेरिका बिरोधि छन् । अमेरिका बिरुद्ध नारा लगाउदछन । राष्ट्रिय स्तरका देशका ठूला पदमा कुर्सीका स्वाद चाखेका नेताहरु अमेरिका आएर बस्दैनन् ।
तर उनीहरु कै सन्तान अमेरिका पढ्न चाहन्छन । अमेरिका बस्न चाहन्छन । विश्व मै अमेरिकालाई घृणा गर्ने र अमेरिकाको बिरोधि देशले चिनिने देश इरान हो । यसै गरि रुस देश पनि त्यस्तै हो । रुस र इरानका नेताहरु अमेरिकाका नेता र अमेरिकालाई गाली गर्छन ।
उनीहरु नै अमेरिकाको लागि कोसिस गर्छन । झन् यस्ताका नातेदार ,आफन्त र सन्तानहरु अमेरिकामा पढ्ने र यतै बस्ने गर्दछन ।
अमेरिकाको कट्टर शत्रु देश रुस तर अमेरिकामा सबै भन्दा आउन चाहने जनता रुसका पनि पर्छन ।हिजो तिनै अमेरिका बिरुद्ध चर्को नारा र अमेरिकन बिरोधिहरु अमेरिका आए पछि कागजपत्र बसेका छन् ।
रुस र रुसका जनताले अमेरिका संग घृणा गर्ने भएको भए अमेरिकामा ३० लाख रुसका जनता अमेरिका आउने थिएनन । यसै गरि ईरान पनि कट्टर बिरोधि देश तर अमेरिकामा १० लाख ईरानीहरु अमेरिकामा स्थाई रुपमा बसोबास गर्छन । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा मात्र इरानीहरु करिव १ लाख अनुमान गरिएको छ । किनभने बिरोधि हुनु एउटा कुरा तर भबिष्य निर्माण गर्ने सवाल भनेको अर्को कुरा ।
यसरी अमेरिकन बिरोधि भएमा अमेरिकाले प्रवेश आज्ञा समेतमा रोक लगाउने समेत हुने हुनाले अरु कुरा तिलान्जली दिदै सबै कुरा सम्झौता गर्दै अमेरिका भासिन चाहन्छन । भाषण र खोक्रो नाराले जीवन र आफ्ना सन्तानको उज्ज्वलमय भविष्य र जीवन बनाउने कुराको सवालमा बिरोधि शब्द त्यतिकै बिलिन हुन्छ ।
यसै गरि अमेरिका बिरुद्ध आवाज उठाउने नेपालीहरु पनि सबै भन्दा ज्यादा अमेरिका आउन चाहन्छन । अमेरिका बिरोधि र चर्क नारा लगाउने हजारौ हजार अमेरिका आएर बसोबास गरि रहेका छन् । बाहिरी रुपले बिरोध गर्नु र भित्रि रुपले देश मन पराउनु भनेको छुट्टै कुरा हो । बिरोध भन्ने हैन बिरोधि भन्ने कुरा को प्रशङ्ग समाबेस गरेको छु ।
ईराक आक्रमण बाट अमेरिकाको बिरोध बिश्व वृद्धि भयो । अझ पनि इराकीहरु अझ बिरोधिहरु छन् तर अमेरिका आउन मरिहत्ते गर्ने यिनै हुन् । इराकीहरु अमेरिका करिव १ लाख ५० हजार भन्दा ज्यादा बसोबास गर्छन ।
हाल सबै भन्दा ज्यादा अमेरिका बिरोधि देशहरु मध्य पूर्वका राष्ट्रहरु रहेका छन् । अमेरिकनहरु पनि इरानलाई मन पराउदैनन । १९७९ मा अमेरिकन दुताबास तेहरानमा बिद्यार्थीले आक्रमण गरि ५२ जना लाई ४४४ दिन बन्धक बनाएरमा राखेको अमेरिकाले भुल्न सकेको छैन ।
ईरान पछि रुस पनि अमेरिकालाई मन पराउदैनन तर तिनै जुलुस र नारामा सहभागी हुने र अमेरिकालाई मन नपराउने आउन चाहान्छन । इजिप्टले अमेरिकालाई केवल १० प्रतिसत मात्र रुचाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसै गरि जोर्डनले १२ प्रतिसत र टर्कीले १९ प्रतिसतले मात्र मन पराउद्छन । तर जे भएता पनि अमेरिका बिरुद्ध खनिनु र बिरोधि भएता पनि अमेरिका आउन र सपरिवार स्थापित हुन् चाहनु पृथक बिषय हुन्छ ।
तर जे भएता पनि अमेरिका बिरुद्ध खनिनु र बिरोधि भएता पनि अमेरिका आउन र सपरिवार स्थापित हुन् चाहनु पृथक बिषय हुन्छ ।
यसरी अनुसन्धान र तथ्यांक हेर्ने हो भने रुसका जनता केवल २३ प्रतिसत मात्र अमेरिकाको सकारात्मक पक्षमा छन् । युरोपका ९ मध्ये ७ राष्ट्र ले अमेरिकालाई सकारात्मक रुपले हेर्छन । इटालिएनहरुले ७८ प्रतिसत, फ्रेन्च नागरिकले ७५ प्रतिसत ,पोल्याण्डका नागरिकले ७३ प्रतिसतले अमेरिका मन पराउछन ।
जर्मनहरु पनि ५१ प्रतिसतले अमेरिकाको पक्षमा रहेका छन् । यसरी पक्षमा भएका राष्ट्रका नागरिकहरु अत्यधिक अमेरिका भासिएका छन् । इटालियनहरु झन्डै १ करोड ७० लाख तथा फ्रान्सेली नागरिक पनि १ करोड भन्दा ज्यादा आँकडाले देखाएको छ । शताब्दी औ देखि इटालियन र फ्रान्सेलीहरु अमेरिका पसेका हुन् ।
एसियन मुलकमा सबै भन्दा अमेरिकाको प्रशंसक देश भनेको फिलिपिन्स रहेको छ भने ९२ प्रतिसतले अमेरिकाको बारेमा सकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने र अमेरिकालाई मन पराउदछ्न । र,अमेरिकामा ४० लाख फिलिपिन्सका नागरिक छन् । यसै गरि दक्षिण कोरिया ८२ प्रतिसत ,बंगलादेश ७६ प्रतिसत ,भियतनाम ७६ प्रतिसत नागरिकहरुले अमेरिका मन पराउद्छन । यसरी मन पराएका देशका मानिसहरु अत्यधिक अमेरिकामा भासिने हुन्छन ।
आस्चर्यको कुरा पाकिस्तानलाई अमेरिकाको सशक्त समर्थन छ तैपनि पाकिस्तानीहरु १४ प्रतिसतले अमेरिकालाई मन पराएको आंकडाले देखाएता पनि अमेरिका सपरिवार जान मरिहत्ते गर्नेमा पर्दछन । पाकिस्तानीहरु अमेरिकाको बिरुद्ध नारा लगाउन पछाडी पर्दैनन् ।
पाकिस्तानीहरु अमेरिकाको बिरुद्ध नारा लगाउन पछाडी पर्दैनन् ।
जसरी जे गरेर भएता पनि अमेरिका छिर्न चाहान्छन । र करिव ४ लाख पाकिस्तानीहरु अमेरिकामा बसोबास गर्छन ।
यसै गरि लेटिन अमेरिकाका देशहरु साल्भाडोरका जनता ८० प्रतिसत ,चिलीका ७२ प्रतिसत तथा निकारागुवाका ७२ प्रतिसत अमेरिकाको पक्षमा उभिन्छन । यसै गरि अफ्रिका राष्ट्रहरु मध्ये केन्याका ८० प्रतिसत ,घाना का ७७ प्रतिसत ,तान्जेनिया का ७५ प्रतिसत तथा सेनेगलका का ७४ प्रतिसत जनता अमेरिकाको पक्षमा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दछन भनि पिउसर्च डट ओर्ग ले अनुसन्धान गरेको छ ।
अमेरिकन बिरोधिहरु प्रसस्त रहेता पनि अमेरिका जसरी पनि कुनै पनि हालतमा अमेरिका आएर भासिन चाहन्छन । अमेरिकाको बिरोधि हुनु कुनै नौलो कुरा हैन । साम्राज्यबाद मुर्दाबाद नारा नेपालका चोक र गल्लि गल्लीमा हामीले सुनेका छौ ।
साम्राज्यबाद मुर्दाबाद नारा नेपालका चोक र गल्लि गल्लीमा हामीले सुनेका छौ ।
यसरी अमेरिकाको घनघोर बिरोध गर्नेहरु विविधता चिट्ठा(डिभी) भरि रहने र ठूलो रकम दलाललाई तिरेर अमेरिका आउन चाहन्छन ।
अमेरिका बिरुद्ध उत्तेजनापूर्ण नारा लगाउनेहरु अमेरिकामा थुप्रै भासिएका छन् । तै चुप मै चुप भएका छन् । अमेरिका बिरुद्ध चर्का उग्र नारा लगाउने जो सुकै पनि अन्ततगत्वा अमेरिका किन भासिन चाहान्छन ? बुझ्नेलाई श्रीखंड नबुझ्नेलाई खुकुरीको बिंड ।